Okike: enamel siri ike
Encha enamel siri ike na akara igwe dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ịdị elu, enamel pin elu na-enwe mmetụta dị nro na ike ọgwụgwụ karịa enamel dị nro.
Otu ihe ahụ dị ka enamel dị nro, pin enamel siri ike nwekwara ike iji ụcha ọla dị iche iche, dịka nickel, ọlaọcha, ọla edo, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla edo bilie… mana ntụtụ enamel siri ike enweghị ike ịnwụ agba na igwe. N'ihi na maka pinke enamel siri ike, usoro ihe ntanye na-abịa mgbe usoro agba ya gasịrị, na tupu ịpịa, enwere usoro dị oke mkpa nke na-eme ka ọ dị iche na enamel dị nro - POLISHING, ọrụ nke nchacha bụ ime ka igwe dị elu na enamel siri ike agba na otu ugbo elu, nke ahụ bụ ihe nzuzo mere na ihe siri ike enamel pin nwere ezigbo ala, ya mere maka ihe siri ike enamel pin, ọbụlagodi ígwè ahụ na-acha, agba ga-emesị kpochapụ n'oge polishing.
Enamel siri ike dị mma maka ọtụtụ akara baajị, mkpụrụ ego, igodo, medal, mkpado, kọflịnks na ngwaahịa ndị ọzọ.
Nke gara aga: Omenala Mere Marathon Medal Na-agba Egwuregwu Medallions
Osote: Onweghị onye na-emeghe ọnụ ụzọ ụzọ ọla ọcha ọla edo ejiri zinc mebere ya
DIY Metal Keychain - Mara mma Design Hard Ena ...